AIRBNB waxay kahadleysaa go'aanka maxkamada sare ee xayiraada socdaalka Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » AIRBNB waxay kahadleysaa go'aanka maxkamada sare ee xayiraada socdaalka Mareykanka
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Iiraan • Wararka Liibiya • News • Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka • Dadka • Wararka Soomaaliya • Wararka Suuriya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Venezuela
Maanta, Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay taageerto xayiraadda socdaalka ee uu qorsheeyay maamulka Trump. Mamnuucidda ayaa ka xaddideysa muwaadiniinta Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela, iyo xitaa “xulafada ugu cusub Mareykanka” Waqooyiga Kuuriya, in ay soo galaan Mareykanka.
Tani waa qeybtii saddexaad ee mamnuucida safarka tan iyo markii la bilaabay iyo ka dib markii la soo maray maxkamado kala duwan. Markii hore, dadka dhaleeceeya waxay ugu yeereen qoraalkii hore mamnuucida safarka ee ka dhanka ah Muslimiinta, si kastaba ha noqotee, hadda waxay ku qasban yihiin inay dib uga fiirsadaan calaamaddaas hadda oo xayiraadda ay sidoo kale ku jiraan Venezuela iyo Waqooyiga Kuuriya. Wadamada la magacaabay ayaa ku jira liistada maxaa yeelay maamulka Trump wuxuu sheegay inay yihiin hanjabaado argagixiso ama aan la shaqeyn karin Mareykanka.
Aasaasayaasha Airbnb, Brian Chesky, Joe Gebbia, iyo Nathan Blecharczyk, ayaa tan ka leh qaabkii ugu dambeeyay ee xayiraadda iyo go'aanka Maxkamadda Sare ee ay ku taageerayso:
Aad ayaan uga xumaannay go'aanka Maxkamadda. Xayiraadda safarku waa siyaasad ka soo horjeedda himiladeenna iyo qiyamkeenna - in la xaddido safarka ku saleysan dhalashada qofka ama diinta waa khalad.
In kasta oo wararka maanta ay yihiin dib udhac, waxaan sii wadaynaa dagaalka aan kula jirno ururada caawiya kuwa saameynta ku yeeshay. Airbnb waxay la mid noqon doontaa tabarucaadka Mashruuca Caawinta Qaxootiga Caalamiga ah (IRAP) ilaa wadar ahaan $ 150,000 illaa Sebtember 30, 2018 si ay u taageerto shaqadooda u doodista isbeddelka nidaamka iyo dariiqa sharciga ah ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen xayiraadda safarka. Hadaad jeceshahay inaad nagu soo biirto waad awoodaa halkan kudeeji.
Waxaan aaminsanahay in safarku yahay khibrad isbadal iyo awood leh isla markaana dhisida buundooyinka udhaxeeya dhaqamada iyo bulshada ay abuureyso adduunyo cusub, iskaashi iyo dhiirigalin leh. At Airbnb, aad ayaan ugu mahadnaqeynaa bulshadeena oo sii wadi doonta inay albaabada u furto adduunka oo dhan si wadajir ah, aan horay ugu sii soconno.